Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo dhoweyn iyo cambaareyn isugu daray golaha wasiirada la magacaabay -
Home News Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo dhoweyn iyo cambaareyn isugu daray golaha wasiirada la...
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan cabdi Shakuur Warsame ayaa soo dhoweeyay golaha wasiirada la magacaabay hase yeeshee waxa uu si weyn uga soo horjeestey magacaabista wasiirka cadaalada Cabdqaadir Maxamed Nuur.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmajo in ay ka go’an tahay dhiiragelinta gacan ku dhiiglayaasha oo uu ula jeedo mid ka mid ah Wasiirada Cusub, kaasi oo lagu Magacaabo C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo horay u ahaa Ku-simaha Taliyaha Nabadsugidda Qaranka.
Halkan hoose ka akhriso Qoraal uu soo saaray Cabdiraxaan CabdiShakuur:
“Waxaan bogaadinayaa xubnaha loo magacaabay Golaha Wasiirada. Waxaana ILAAHEEY uga baryayaa in uu hawshooda u fududeeyo. Waxaase arrin laga naxo ah in C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo horay u ahaa Ku-simaha Taliyaha Nabadsugidda Qaranka, hormuudna u ahaa kooxdii 17-kii Diseembar 2017-kii weerarka ku soo qaaday xarunta Xisbiga Wadajir loo magacaabo Wasiirka Caddaaladda.
Previous articleThe final Trump-Biden debate includes the ‘silent’ button to avoid disruption
Next articleArgentina’s Covid-19 case exceeds 1 million as the health care system peaks